Iindaba-Inkqubo yoCingo lwe-Disinfection esekwe kwi-UVC esekwe kwi-UVC ye-LED ukuba ifakwe ezikolweni
Ukukhanya kwangaphakathi kweBhalbhu
Ibhalbhu engxamisekileyo ye-LED
I-Bulb ye-Smart ye-Smart elawulwa yiSelfowuni
I-Bulb ye-LED eneMotion Sensor kunye neSensor Light
I-Tube ye-T8 ye-LED ene-G13 Base
Hlanganisa i-Tube ye-T8 ye-LED
Isakhelo seTyhubhu ye-LED
Ityhubhu ye-LED engxamisekileyo
Izindlu zeT8 zoBungqina boBungqina
I-T8 Tube eneRada
Ukukhanya okuPhezulu kwe-LED
Uyilo olukhethekileyo lokuKhanya kwe-LED
Ukukhanya kwelanga lokukhanya okungxamisekileyo
Ukukhanya kwePaneli ye-LED kunye nokuKhanya kwePaneli ePhantsi
Iphaneli ye-LED ephantsi kokuKhanya
Ukukhanya kweStar Linear
Ukukhanya kobungqina bohambo lwe-LED
Ukukhanya koBungqina boBu-High Bay
Ukukhanya kwe-UV inzala
Ukukhanya kwebhokisi yezihlangu
Ukukhanya kwelanga kwe-LED
Ukukhanya Kwezitalato ze-Solar Street
Konke kukuKhanya kwelanga
Ukukhanya koMkhukula we-Solar ye-Solar
Okunye ukukhanya kwelanga kwe-LED
Olunye ukhanyiso lwe-LED
Ukukhanya kweNdonga ye-LED
UkuKhanya kokuKhanya kwe-LED
Inkqubo yokuCoca iintsholongwane eMoyeni esekwe kwi-UVC ye-LED ukuba ifakwe ezikolweni
Amandla okubopha, iYunivesithi yePurdue ehambelana nomenzi wokukhanyisa i-LED avelise inkqubo yokubulala iintsholongwane enokuthi incanyathiselwe kwisilingi ukucoca umoya ukusuka phezulu kwigumbi kunye nokukhanya kwe-UVC okuhanjiswa zii-LED ezifakiwe.
NgokweYunivesithi yePurdue, esi sixhobo senzelwe ukusebenzisa ukukhanya kwe-UVC ekubulaleni usapho lwe-SARS-COV-2 lwezifo. U Patricio M. Daneri, umlawuli ophetheyo kwicandelo laMandla eMidwest Energy, uthe, “Iyunithi yethu yokuHamba koMoya esebenzayo inika ithuba elongezelelekileyo lokusetyenziswa okukhuselekileyo ngexesha losuku lwesikolo kumagumbi okufundela anabantu abaninzi. Iyunithi inenkqubo yabalandeli yokuzoba emoyeni, apho icocwa khona emva koko ngebhayisikile ibuyele egumbini. ”
Inkampani icwangcisa ukufaka isilingi yentaba yenkqubo yokubulala iintsholongwane kunyaka ozayo wesikolo kwizikolo ezibini kumbindi weIndiana State eMelika.
Uninzi lwabaphandi baqinisekisile ukuba ukukhanya kwe-UVC kunokuzinciphisa ngokufanelekileyo izifo ze-COVID-19. Uluhlu olubanzi lwezicelo ezisekwe kubuchwephesha be-UVC ye-LED nazo ziyasungulwa ukunqanda ukusasazeka kwesi sifo. Uvavanyo lwe-LRC lubonise ukuba kwigumbi eliphezulu iimveliso zokucoca umoya zezona zinto zaziwayo kwiimveliso zentsholongwane phakathi kwabathengi ngelo xesha.
Ngokwesiqhelo abantu bayazi kuphela ukuba ukukhanya kwe-UV kuyenzeka ukubulala iintsholongwane kunye neentsholongwane, kodwa abazi zinkcukacha malunga ne-wavelength okanye ililluminance. Kubavelisi ababecwangcise ukugqiba ukuveliswa kwezibane eziqhelekileyo, le ndlela ye-UVC yezibane iba yinto enkulu. Thatha umqondiso umzekelo, kukhulisa iindidi zemveliso kunye nemigca kunye notyalo mali UV umvelisi, GLA, eNetherland, ebonisa ukuba ubushushu be-UVC isibane esiqhelekileyo asizukuphela ngokufutshane.